अनियमित महिनावारीले हेमोग्लोबिन कमी र बाँझोपनको जोखिम बढाउँछ : स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. ममता बराल Canada Nepal
अनियमित महिनावारीले हेमोग्लोबिन कमी र बाँझोपनको जोखिम बढाउँछ : स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. ममता बराल
काठमाडौं । महिलाहरुमा किशोरी अवस्था लागेपछि प्रत्येक महिना हुने रजश्वलालाई महिनावारी भनिन्छ । यो प्रजनन् क्षमताको लक्षण पनि हो । साधारणतया २२ दिनदेखि २८ दिन भित्रमा महिनावारी हुन्छ । यो समय भन्दा ढिलो वा छिटो भयो भने यसलाई अनियमित महिनावारी भनिन्छ ।
विशेषगरि किशोरी अवस्था अर्थात १० वर्षदेखि १४ वर्षको उमेरमा महिनावारी सुरु हुन्छ । यो समयभन्दा छिटो भयो वा ढिलो भयो भने अनियमित महिनावारी भन्ने गरिन्छ । ८० प्रतिशत महिलामा हर्मोनका कारणले अनियमित महिनावारी हुन्छ । रगतमा २० प्रतिशत खराबी हँुदा पनि अनियमित महिनावारी हुन्छ । पाठेघरमा ट्युमर हुँदा महिनावारीका क्रममा बढी रगत जाने हुन्छ । रिप्रोडक्सन उमेर ः विवाहपछि वा सेक्सुअल इन्टरकोष भएपछिका महिलामा प्रेग्मेन्सी कम्पिकेशन धेरै हुन्छ । बच्चा बस्ने खेर जाने, एभनर्मल बच्चा भएमा रगत जाने हुन्छ ।
औषतभन्दा बढी रगत बग्ने समस्या भएका महिलाहरुको सबैभन्दा पहिला के कारणले रगत बग्ने समस्या भयो भनेर परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । ४० वर्षदेखि ५२ सम्मका महिलामा देखिने समस्या अस्पताल आएका ४० वर्षदेखि ५२ वर्ष उमेर समूहका ७५ प्रतिशत महिलामा महिनावारी गडबढी देखिएको छ । यो उमेर समूहका माहिलामा हुने महिनावारी गडबढीलाई महिनावारी सुक्न लागेको भन्दै बेवास्ता गर्ने भएकाले पनि महिलाहरुमा थप स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ । उपचार गर्न अस्पताल नगएर वा अस्पतालको पहुँचमा नभएर यो उमेरका महिला रगत बगाएर बसेका हुन्छन् ।
यो समस्याका कारण करिब २० प्रतिशत महिलामा पाठेघर सम्बन्धि क्यान्सर लाग्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ । ४० देखि ५२ वर्ष उमेर समूहका महिलामा अनियमित रगत बगेमा अस्पतालमा गएर उपचार गर्नु आवश्यक छ । महिनावारी रोकिएपछि रगत बग्यो भने यसलाई समस्याको रुपमा लिनुपर्छ । विशेषज्ञ चिकित्सककहाँ गएर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जोखिम धेरै दिनसम्म रगत जानाले हेमोग्लोबिनको कमी हुन्छ किशोरीहरुमा कमजोरी महसुस हुने र दैनिक क्रियाकलापमा असर गर्ने रक्तअल्पता वा एनिमिया हुने व्यक्तिगत तथा सामाजिक अस्वस्थता यौन जीवनमा समस्या बाँझोपनको समस्या यौनाङ्ग र पाठेघरमा क्यान्सरको समस्या बच्ने उपाय अनियमित महिनावारी भएपछि सम्बन्धित विशेषज्ञसँग नै परिक्षण गराउने समयमा नै र उचित रुपमा चिकित्सकको सल्लाहअनुसार औषधि सेवन गर्ने क्यान्सर स्क्रिनिङ टेस्ट गर्ने प्रिक्यान्सर स्टेजमा नै रोग पत्ता लाग्दै उपचार गर्न सके क्यान्सर हुनबाट बचाउन सकिन्छ
मंसिर ८, २०७६ आइतवार ११:५७:०० बजे : प्रकाशित